Uhlelo lokuxazulula izinyathelo lukaBayer lususa intukuthelo, ukuphikisana - Ilungelo Lokwazi laseMelika
Posted on Mashi 10, 2021 by UCarey Gillam
(Kubuyekezwe uMashi 10 ukufaka i-oda lejaji elibambezela ukulalelwa kuze kube nguMeyi 12)
Amafemu ezomthetho angaphezu kwama-90 kanye nabameli abangaphezulu kwe-160 bazise ijaji lasenkantolo eyengamele icala le-US Roundup ukuthi bayaphikisana nohlelo lomnikazi weMonsanto uBayer AG uhlelo olungu- $ 2 billion lokuxazulula izimangalo zesikhathi esizayo inkampani elindele ukulethwa ngabantu abatholakala benomdlavuza abasola ngokusetshenziswa kwawo. Imikhiqizo yokubulala ukhula kaMonsanto.
Ezinsukwini ezisanda kwedlula, sekuphikiswe izikhalazo eziyisishiyagalolunye ezihlukene ngalolu hlelo nemibhalo emine yama-amicus eNkantolo yesiFunda yase-US yesiFunda esiseNyakatho neCalifornia, kwaziswa iJaji uVince Chhabria ubukhulu bokuphikiswa endaweni yokuhlala ehlongozwayo. U-Chhabria ubengamele izinkulungwane zamacala omdlavuza we-Roundup kulokho okubizwa ngokuthi 'yi-multidistrict litigation' (MDL).
NgoMsombuluko, iNational Trial Lawyers (NTL) wajoyina iqembu eliphikisayo egameni lamalungu ayo ayi-14,000. Iqembu lathi ekufakweni kwabo enkantolo ukuthi bayavumelana nabaphikisi ukuthi “lesi sivumelwano esihlongozwayo sibeka engcupheni ukutholakala kobulungiswa kwezigidi zabantu abasesigabeni esihlongozwayo, sizovimbela izisulu zikaMonsanto ukuthi zingaziphenduli, futhi sizoklomelisa iMonsanto ngezindlela eziningi . ”
Leli qembu liphinde lafaka umbono walo wokwesaba ukuthi uma isivumelwano sikaBayer esihlongozwayo samukelwa, sizobeka isibonelo esiyingozi kubamangali ngokuzayo, emacaleni angahlobene: “Kuzolimaza amalungu ekilasi ahlongozwayo, hhayi ukuwasiza. Le ndlela yokuhlala izophinde inikeze isifanekiso esingabambeka kwabanye abahlukumezi bezinkampani ukugwema isikweletu nemiphumela efanele ngokuziphatha kwabo… ukuhlinzekwa kwesigaba esihlongozwayo akuyona indlela 'uhlelo lwezobulungiswa' olusebenza ngayo ngakho-ke leso sivumelwano akufanele sivunyelwe. ”
Isinxephezelo esihlongozwayo esingu- $ 2 billion kuhloswe emacaleni esikhathi esizayo futhi ihlukile ku- $ 11 billion iBayer ebekelwe ukukhokhela izimangalo ezikhona ezalethwa ngabantu abathi bathuthukisa i-non-Hodgkin lymphoma (NHL) ngenxa yokuchayeka kubabulali bokhula bakaMonsanto. Abantu abathintwe yisiphakamiso sokuxazululwa kwesigaba ngabantu ababekeke bathola imikhiqizo ye-Roundup futhi asebevele benayo i-NHL noma bangathuthukisa i-NHL ngokuzayo, kepha abangakazithathi izinyathelo zokufaka icala.
Akukho monakalo wesijeziso
Enye yezinkinga ezisemqoka ngohlelo lweBayer, ngokusho kwabagxeki, ukuthi wonke umuntu e-United States ohlangabezana nenqubo njengommangali ongaba ngummangali uzoba yingxenye yekilasi ngokuzenzakalela futhi ngokuya ngemibandela yalo uma engaphumi ngenkuthalo class kungakapheli izinsuku eziyi-150 ngemuva kokuthi iBayer ikhiphe izaziso zokwakhiwa kwesigaba. Isaziso esihlongozwayo asenele, abagxeki bathi. Ngaphezu kwalokho, uhlelo bese luhlubula labo bantu - abangahle bangakhethi nokuba yingxenye yekilasi - ukusuka kwelungelo lokufuna ukulimala kokujeziswa uma befaka icala.
Okunye ukuhlinzekwa kokuthola ukugxekwa kuyisikhathi seminyaka emine "sokuma" esivunyelwe ukufakwa kwamacala amasha.
Abagxeki baphikisana nokwakhiwa okuhlongozwayo kwephaneli lesayensi elizosebenza "njengesiqondisi" sokwengezwa kwezinketho zesinxephezelo esikhathini esizayo "nokunikeza ubufakazi mayelana nokubulawa kwe-carcinogenicity - noma cha - kweBayer.
Ukulwela ukuthola isixazululo
Amajaji kwesinye nesinye sezivivinyo ezintathu awatholanga elikaMonsanto kuphela ukhula lwe-glyphosate-based njenge-Roundup kubangela umdlavuza, kepha nokuthi uMonsanto uchithe amashumi eminyaka efihla izingozi.
Iqembu elincane labameli abahlanganisa lolu hlelo neBayer bathi “luzosindisa izimpilo” futhi luzohlinzeka “ngezinzuzo ezinkulu” kubantu abakholelwa ukuthi baba nomdlavuza ngenxa yokuchayeka emikhiqizweni yokubulala ukhula yenkampani.
Kodwa lelo qembu labameli lizokwamukela amaRandi ayizigidi ezingama-170 ngomsebenzi wabo neBayer ukwenza uhlelo oluhlongozwayo, abagxeki beqiniso bathi kungcolisa ukubandakanyeka kwabo nenhloso yabo. Akekho noyedwa wabameli ababambe iqhaza ekuhlanganiseni uhlelo lokusebenza lwesigaba kanye neBayer olumele ngenkuthalo noma yibaphi abamangali enkantolo ebanzi ye-Roundup ngaphambi kwaleli phuzu, abagxeki bathi.
Kokunye kokufakwa kweqembu eliphikisayo, abameli abafuna ukwenqatshwa kwesivumelwano esihlongozwayo ubhale lokhu:
“Lesi sivumelwano esihlongozwayo siphikiswa yilabo abajwayelene nokuqulwa kwamacala athinta imikhiqizo eyingozi efana neRoundup ngoba bayabona ukuthi lesi siphakamiso sizohlomulisa abakwaMonsanto nabeluleki besigaba ngokona kwezigidi zabantu abadalulwe kuRoundup.
“Yize le Roundup MDL iqhubeke iminyaka engaphezu kwemine, namanye amacala e-Roundup ebekwe amacala ezinkantolo zombuso, umfutho walokhu kuxazululwa kwezigaba ezakhiwe ngobunjiniyela akuveli kubameli abebephethe amacala e-Roundup futhi bakholelwa ukuthi enye indlela ukuzixazulula kubalulekile. Esikhundleni salokho, abameli abasemuva kwalesi sikhalazo - futhi ngokuqinisekile bangabameli hhayi izisulu zeRoundup - bangabameli bezinyathelo ezifuna ukuphoqelela imibono yabo kubo bonke labo abadalulwe kuRoundup, ngenani lemali enkulu kakhulu.
“Kodwa ozophumelela kakhulu lapha kuzoba yiMonsanto, ezothola ukuhlala iminyaka emine kwamacala ngamalungu ekilasi, azophinde alahlekelwe yilungelo lawo lokufuna ukulinyazwa bese eboshelwa imiphumela yethimba lesayensi elikhulelwe kabi. Ukushintshanisa, amalungu ekilasi azofakwa kwesinye isistimu yesinxephezelo esinezinkokhelo eziphansi, ubunzima obukhulayo, nezithiyo eziphezulu ukuze ufaneleke. ”
Uhlelo lokuxazulula inkinga lukaBayer lwafakwa enkantolo ngoFebhuwari 3, futhi kumele luvunyelwe yiJaji uChhabria ukuze lusebenze kahle. Uhlelo lokukhokhelwa kwangaphambili olwenziwe ngonyaka owedlule lwalungu- edelelwa uChabria abese ehoxa.
Ukulalelwa kwalolu daba kulindeleke ukuthi kube ngoMashi 31 kodwa abameli abahlanganisa lolu hlelo neBayer babuze iJaji uChhabria ukubambezela ukulalelwa kuze kube nguMeyi 13, becaphuna ububanzi beqembu eliphikisayo okufanele balukhulume. Ijaji liphendule lathi umyalelo ukusetha kabusha ukulalelwa kwecala ngoMeyi 12.
"Lokhu kufakwa sekungaphezu kwamakhasi angama-300, ngaphezu kwamakhasi angaphezu kuka-400 wezimemezelo nemibukiso enamathiselwe," kusho abameli isicelo sabo sokuthola isikhathi esithe xaxa. “Iziphikiso nemifushane ye-amicus iphakamisa inqwaba yezingqinamba, kufaka phakathi, phakathi kokunye, ukulunga okuphelele kwendawo yokuhlala, ukuhlaselwa okuningi komthethosisekelo endaweni yokuhlala kanye nephaneli lesayensi elihlongozwayo, izinselelo zobuchwepheshe ohlelweni lwezaziso, ukuhlaselwa kobulungiswa isikhwama sesinxephezelo, nezinselelo zokuvelela, ukuphakama, kanye nokwanela kweseluleko sabantu abasesigabeni (kanye nabaphansi). ”
Abameli abafake lolu hlelo oluhlongozwayo bathi bangasebenzisa lesi sikhathi esingeziwe ngaphambi kokuqulwa kwecala "ukusebenzisana nabaphikisi" "ukwenza lula noma ukunciphisa izingqinamba ezidinga ukuphikiswa ekulaleleni."
Phakathi kwezimpikiswano zokukhokhelwa okuhlongozwayo kukaBayer, abamangali bayaqhubeka nokufa. Kulokho okubizwa ngokuthi “Ukusikisela Kokufa,” abameli bommangali uCarolina Garces bafaka isaziso enkantolo yombuso ngoMashi 8 ukuthi ikhasimende labo selishonile.
Abamangali abaningana abaphethwe yi-non-Hodgkin lymphoma ushonile selokhu kwaqala ukuqulwa kwecala ngo-2015.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker Bayer, umdlavuza, imvelo, glyphosate, zezempilo, ukhula, Abameli, mass tort, Monsanto, i-non-Hodgin lymphoma, izibulala-zinambuzane, ababeki icala, RoundUp, i-San Francisco, isayensi, umbulali wokhula